WAR CUSUB:Xaalada Villa Soomaaliya iyo Warbixin Xasaasi ah oo BBC-du ay ka Samaysa Maanta. | jubbaland news
WAR CUSUB:Xaalada Villa Soomaaliya iyo Warbixin Xasaasi ah oo BBC-du ay ka Samaysa Maanta.
Sep 8, 2017 - Aragtiyood
Dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa Hogaanka Amniga iyo Arrimaha Gudaha ee jabhadda ONLF.
Haddii si kale loo dhigana wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidammada qalabka sida ee jabahadda.
Dhiibitaanka Qalbi Dhagax ka dib warbaahinta Soomaalida oo dhan ayaa soo hadal qaaday magaca ONLF, Haddaba BBC-da ayaa qormadan ku milicsanaysa waxa sababay in magacaasi uu maqalkiisu yaraado.
Jabhadda ONLF ayaa la aasaasay 1984, ugu yaraan labaatankii sano ee la soo dhaafayna dagaal hubaysan ayay kula jirtay Dawladda Itoobiya. Waxay dooneysaa in gobolka Soomaalida ee Itoobiya uu madaxbannaani ka qaato itoobiya.
Waxayse aad u soo caan baxday oo saxaafadda caalamku aad uga sheekaysay 2007dii markaas oo ay Deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dileen 65 Itoobiyaan ah iyo sagaal ruux oo Shiinays ah oo shidaal ka qodayay gobolkaas, sida ay markaas sheegeen saraakiisha Itoobiya.
Dagaalkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Coballe oo qiyaastii 120 kiiloo mitir u jirta magaalada Jigjiga.
Ra’iisulwasaarihii Itoobiya ee xiligaas Meles Zenawi wuxuu ku tilmaamay “xasuuq”
Balse ONLF waxay sheegtay in ay horay ugu digtay in aan deegaanka shidaal laga qodi karin inta uu aayihiisa ka tashanayo.
Meles wuxuu carabka ku adkeeyay “in uu ku dadaali doono in taasi oo kale aysan mardambe dhicin”.
Intaas wixii ka dambeeyayna jabhaddu weerarro aan xoog badnayn ayay ku qaadi jirtay ciidammada Itoobiya.
Markaas waxay ka mid ahayd wakhtiyadii ay jabhaddu ugu cudud roonayd, waxaana intaas u dheeraa in ay ku naaloonaysay taageero baaxad leh oo gudaha ku sugnaa iyo jaaliyado aad isugu duubnaa oo daafaha caalamka oo dhan ku kala sugnaa.
Hadda waxaa cad in arrintu aysan sidaa ahayn, haddaba maxaa is badalay?NLF waxayna gobolka ka billawday hawlgallo milatari iyadoo ciidammadii la xoojiyay.
Ra’iisalwasaarihii geeriyooday Meles Zenawi oo marar badan xukuumaddiisa lagu eedeeyay in ay gacan bidixaysay deegaanka Soomaalida ayaa ballan qaaday in uu arrintaas wax wayn ka badali doono muddo shan sano gudahood ah.
“Gacanna ammaanka ayaan ku sugaynaa, gacanna horumarka ayaan kaga shaqaynaynaa” ayuu yiri Meles.
Intaas ka dibna waxaa billawday mashaariic hormarineed oo heer kala duwan leh oo malaayiin doolar ay ku baxday.
Waxyaabaha uu deegaanku markii u horraysay yeeshay waxaa ka mid ah Garoomo caalami ah sida midka Jigjiga iyo kan Qabridahar
Kuuliyado kala duwan oo lagu barto culuunta caafimaadka, maamulka, farsamada gacanta iyo midda macallimiinta, Waddooyin laami ah iyo kaabayaaal dhaqaale oo kale.
Qorshihii ugu waynaa ee dhanka ammaanka ah wuxuu ahaa midkii lagu alkumay ciidammada gaarka ah ee Liyuu booliis.
Maadama oo ay ahaayeen dad deegaanka u dhashay durba waxay laf dhuun gashay ku noqdeen ciidammadii ONLF, in ay ciidan ahaan ula dagaalameen ka sokow waxay mudanaan badan siiyen sidii ay meesha uga saari lahaayeen taageerada shacab ee kooxda.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedaysay ONLF iyo ciidammada gaarka ee Liyuu boolis inay geysteen dambiyo dagaal sida dilal baahsan, jirdil, kufsi iyo barakicin. Labudbua way beeniyeen eeeymahaasi.
Way adagtahay in arrimahasi si madax banaan loo xaqiijoyo maadama oo dowladda Itoobiya ay xaddiday hay’adaha gargaarka iyo suxufiyiinta.
Qaar badan oo ka mid ah dadkii ay jabhaddu ku qancisay in ay la dagaalamayaan dad ajaaniib ah oo dhulkooda ku soo duulay ayaa marar badan arkay ilma adeer dhaw, qaraabo ama dad kale oo isu dhaw oo ku kala dhintay labada dhinac ee jabhadda iyo Liyuu Booliis.
Markii ay dawladda faderaalka ah aragtay ahmiyadda ciidammada gaarka ah ee deegaanka ayay sii xoojisay markii dambana waxayba gabi ahaan ku wareejisay masuuliyadda amniga gudaha deegaanka, milatariga faderaalkuna wuxuu xoogga saaray ammaanka xadka oo kali ah.